घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू कर्टिस जोन्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो कर्टिस जोन्स बायोग्राफीले तपाईंलाई उनको बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुनु, कारहरू, नेट वर्थ, जीवनशैली र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँछ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यो अंग्रेजी पेशेवर फुटबलरको जीवनकाल हो, उहाँ बाल्यकालदेखि, जबसम्म उहाँ प्रसिद्ध हुनुभयो। तपाईको आत्मकथा भूखलाई छेड्न, यहाँ उसको ग्यालरी छ - ली क K्ग-इनको बायोको एक सारांश।
कर्टिस जोन्सको शान्तिमय जीवन हामी शर्त लगाउँछौं जुन तपाईंलाई थाहा थिएन।
हो, सबैलाई टोक्सथबाट परिवारको उत्पत्ति भएको फुटबलर चिन्छ (लिभरपूल सिटी सेन्टरको दक्षिण) उसको क्लबको लागि धेरै चोटि शो चोरी भएको छ। जहाँसम्म, केवल केही प्रशंसकहरू कर्टिस जोन्सको जीवनी विचार गर्छन् जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
कर्टिस जोन्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक पृष्ठभूमि र प्रारम्भिक जीवन
जीवनी सुरु गर्नेहरूको लागि, ऊ उपनाम उपनाम लिन्छ "फलामको पर्दा"। कर्टिस जुलियन जोन्स इ 30्ल्यान्डको लिभरपूलमा जनवरी २००१ को th० औं दिनमा जन्म भएको थियो। उहाँ आफ्नी आमा, सान्ड्रा र उनको थोरै ज्ञात बुबामा जन्मेका चार बच्चाहरूमध्ये कान्छी हुनुहुन्छ।
यहाँ कर्टिस जोन्स अभिभावकको एक फोटो छ।
लि known्गपूल शहरको केन्द्रको दक्षिणी भाग टोक्सेथमा हुर्केका थिए जहाँ उनी आफ्ना तीन ठूला ठूला ज्ञात भाई बहिनीहरूको साथ हुर्केका थिए। टोक्सटेथमा मध्यमवर्गीय पारिवारिक पृष्ठभूमिमा हुर्केका, जवान जोन्स एक फुटबल उत्साही र सडक बालक थिए जसको प्रारम्भिक जीवन फुटबल खेल्ने वरिपरि घुम्न थाल्थ्यो र अवसरहरू भन्दा राम्रो पनि बनाउँथ्यो जब तिनीहरू आउँथे।
“म धेरै जसो स्कूअर्स (लिभरपुलका मानिसहरूले) जसो गरे पनि हुर्किएँ। फुटबल सपनाको साथ बस सडक बच्चा हुँ। यद्यपि त्यहाँ मेरा राम्रा सपनाहरू र मेरा साथीहरूका सहयोगका लागि उत्तम सुविधाहरू थिएनन्, त्यहाँ हामीले आफ्नो हात राखेका सबै चीजहरू भन्दा बढी उपयोग गर्ने विकल्प थियो। ”.
आफ्नो प्रारम्भिक जीवन को जोन्स सम्झना।
कर्टिस जोन्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
सबै भन्दा धेरै बनाउने कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँ जोन्स सडकको शीर्षमा एक प्राथमिक स्कूल थियो जुनसँग नजिकको उत्तम फुटबल पिच थियो। यसमा राम्रो लाइटिंग पनि थियो जसले रातका खेलहरूलाई समर्थन गर्न सक्दछ।
जोन्स र उनका साथीहरू प्रायः राती पिचमा खेल्न स्कूलको बारमा चढ्थे। केहि अन्य रातमा, तिनीहरू स्कूलहरू मध्ये एक चल गोल पोस्ट उधार लिन र सडकमा सडकमा खेल्थे।
सानो कर्टिस र साथीहरूले orrowण लिइएको चल गोलपोस्टहरूको साथ स्ट्रिट फुटबल खेल्थे।
कर्टिस जोन्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
जोन्स9वर्षको उमेरमा, उनले लिभरपूल युवा एकेडेमीमा पहिले नै स्थान पाइसकेका थिए र प्रतिस्पर्धी फुटबलको अनुभूति पाउन स्कूल फेन्समा उफ्रने वा गोल पोस्ट उधारोमा भर पर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन।
त्यसपछिका वर्षहरूमा, युवा जोन्सले एकेडेमीको दर्तामा एक सुन्दर बृद्धि दर्ता गरे र उनी १ star वर्षको उमेरमा लिभरपूलको १s को उमेरमा फिचर हुन थाल्दा एक स्टारलेट बन्न पुगे!
कर्टिस जोन्स महिनाको एक दुर्लभ तस्बिर जब उनी १ age वर्षको उमेरमा स्टार्ट बने।
कर्टिस जोन्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सडकमा फेम स्टोरी
धेरै समय नबित्दै जोन्स स्किलसेट र आत्मविश्वास उनको ट्रेडमार्क यस्तो भयो कि उनले १ U वर्षको उमेरमा यु २23 खेलहरूमा प्रदर्शन गर्न शुरू गरे। यस्तो मौसम वृद्धिसँगै जोन्स बलमा विस्तृत रूपमा वर्णन गरे र अनावश्यक रूपमा आफ्नो प्रतिभालाई अगाडि बढाए जब उनी फर्किए। उसको आफ्नै उमेर समूह।
जोन्स U18 कोच र बचपनको मूर्ति को प्रबन्धन को लागी धन्यवाद स्टीवन गेरार्ड, उनी संयम सिक्न बाध्य भए र केवल उत्तम फुटबल प्रतिभा हुन परिष्कृत। त्यसपछि म्यानचेस्टर सिटी र म्यानचेस्टर युनाइटेड आए उनले आफ्नो हस्ताक्षर प्राप्त गर्न खोजे तर जोन्स रेडमा रहन भने।
"स्थानीय केटाको रूपमा लिभरपूलको प्रतिनिधित्व गर्न र स्थानीय केटाहरू के गर्न सक्षम छन् भनेर देखाउन म केवल एउटा महत्वाकांक्षा राख्छु"।
लिभरपूलमै बस्ने जोन्सले गरेको उनको निर्णयको खुलासा।
राइजिंग स्टारले म्यानचेस्टर युनाइटेड र म्यानचेस्टर सिटीबाट प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि लिवरपूलसँग पहिलो व्यावसायिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो।
कर्टिस जोन्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
यसमा कुनै शंका छैन कि लिभरपूलको जोन्सको विकास र ठूला चीजहरू आउने सम्भावनामा विश्वास थियो। वास्तबमा, स्टीवन गेरार्ड उसको वरिपरि U18 टोली निर्माण गर्‍यो किनकि केटोसँग केही नहुने कुरा सिर्जना गर्ने गुण थियो। जब समय सहि थियो, जोन्सले पहिलो टीम टोली डेब्यू January जनवरी २०१ on मा एफए कप तेस्रो राउन्डमा भोल्वरहैम्प्टन वान्डरर्सको बिरुद्ध पहिलो भेट गरे।
सेप्टेम्बर २०१ in मा मिल्टन केनेस डन्स बिरुद्ध एक EFL कप खेल पछि शानदार मिडफिल्डर प्लेयर अफ द मैचको रूपमा देखा पर्न सके। लिभरपूलको EFL कपको शूट आउट आउटमा उनले विजयी पेनल्टी खेल्दा आश्चर्यजनक बच्चा पनि बेवास्ता गर्न गाह्रो थियो। डिसेम्बर २०१ 2019 मा आर्सेनल। करीव days२ दिन पछि, जोन्सले २० यार्डबाट कर्लिंग स्ट्राइकले नेटको पछाडि एन्फिल्डको एफए कपमा एभर्टन १-० लाई हराउन आफ्नो जाल फिर्ता पाउँदा उनी अपरिवर्तनीय भए।
कर्टिस जोन्सले एभर्टनको बिरुद्ध तेज गोलले उसको मन जित्यो र उनका साथीहरू। उहाँ आफ्ना प्रशंसकहरू र विरोधकर्ताहरू सबैले प्रशंसा गर्नुभयो।
कर्टिस जोन्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सम्बन्धी जीवन तथ्यहरू
के तपाईंलाई थाहा छ कर्टिस जोन्स फुटबल स्टारहरूको वर्गसँग सम्बन्धित छ जो विजेताहरू हुन् कि पिच प्लेमा होस् वा बन्द? उनको प्रेम जीवन मा एक झलक तपाईं विश्वस्त हुनेछ।
डिसेम्बर २०१ 'भन्दा अघि कर्टिस जोन्सको प्रेमिका बारेमा धेरै थाहा थिएन। वास्तवमा जोन्सको सम्बन्ध स्थिति उसले कम्पाइरस गर्ने कुरा हो जबसम्म उसले ट्विटरमा आफ्नो र आफ्नो प्रेमिकाको तस्विर पोष्ट गर्दैन।
यस फोटोमा देखाईएको छ कर्टिस जोन्स प्रेमिका तपाईं कति मनपर्दो गर्न सक्नुहुन्छ?
ट्वीटर पोष्ट पछि, जोन्स - जसको कुनै छोरा (हरू) वा छोरी (हरू) विवाहबाट बाहिर छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ कि उनी आफ्नो सानो परिचित तर उत्तम प्रेमिकाको साथ भविष्यको बारेमा योजनाहरू बनाउँदैछन्। फ्यानहरू lovebirds सम्बन्धको समर्थन मा छन् र उनीहरु पति र पत्नी बन्न को लागी प्रतीक्षा गर्न सक्दैन।
कर्टिस जोन्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन तथ्य
यसले सहयोगी अभिभावक र भाई बहिनीहरूलाई स्टार-जोन्स जोन दिनको लागि लिन्छ। हामी तपाइँलाई कर्टिस जोन्सका परिवारका सदस्यहरूको बारेमा आफ्ना आमा बुबाआमाबाट जानकारी ल्याउँदछौं।
कर्टिस जोन्सको बुबा र आमाको बारेमा: कर्टिस जोन्स अभिभावकको साथ सुरू गर्न, उनको बुबा लेख्न को लागी ज्ञात गरिएको छैन। जे होस्, खेलाडीको आमा Sandra को रूप मा पहिचान गरीएको छ। उनी जोनसँग लिभरपूलमा रहेको आफ्नो क्यारियर निर्माणको क्रममा अक्सर प्रशिक्षणमा आउँथिन् र कहिलेकाहिँ प्रशिक्षण पछि उनलाई उठाउन ठण्डामा जाउँथिन्। यो भन्दै बिना गयो कि सान्ड्राले आफ्नो कान्छो छोराको साथ घनिष्ठ बन्धन साझेदारी गर्‍यो।
कर्टिस जोन्सकी आमा सान्ड्रालाई भेट्नुहोस् जो उहाँलाई अनन्त कालदेखि प्रशिक्षणमा साथ दिन चाहन्छन्।
कर्टिस जोन्सका भाइबहिनीहरू र आफन्तहरूको बारेमा: कर्टिस जोन्स तीन सँगसँगै हुर्किए तर भाईबहिनीको पहिचान हुन सकेन। त्यस्तै, यो अझै थाहा भएन कि भाईबहिनीहरू भाइबहिनीहरूको मिश्रण हो वा केवल एक विशिष्ट लि gender्गको। त्यस्तै जोन्सको पारिवारिक जरा वा पुर्खाको बारेमा खासै ज्ञात छैन, विशेष गरी उनका बुवा र बुवाआज्यू हजुरआमा, जोन्स अंकल, बुआ, काका, भतिजा र भतिजीहरू अझै पनि यो जीवनी लेख्दा चिनिन सकेका छैनन्।
कर्टिस जोन्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन तथ्य
त्यहाँ कर्टिस जोन्सको राम्रो ध्यान रहेको तथ्यलाई अदालतले ध्यानाकर्षण गर्ने कुनै तथ्य छैन। यद्यपि यो उसको व्यक्तित्व हो कि जसले ऊसंग भेट भयो उसको मुटु कब्जा गर्दछ। जोन्सको आकर्षक व्यक्तित्वको लक्षण एक्वेरियस राशि चिन्ह द्वारा परिभाषित गरिएको छ।
तीनिहरुमा उसको प्रतिस्पर्धात्मकता, आत्मविश्वास, अव्यवस्थित स्वभाव र आफ्नो निजी र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा धेरै कुरा नलुकाउने कुरा समावेश छ। उसको रुचि र शौक मा खाना पकाने, संगीत सुन्न र आफ्नो साथीहरु र परिवार संग राम्रो समय बिताउनु समावेश छ।
कर्टिस जोन्स खाना पकाउन मन पराउँछन्। उनी यहाँ नाबी केइटाको साथ चित्रित छन्।
कर्टिस जोन्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - जीवन शैली तथ्य
कर्टिस जोन्सले कसरी आफ्नो पैसा कमाउँछ र कसरी खर्च गर्छ भन्ने सन्दर्भमा उसको कुल सम्पत्ति अझै लेखनको क्रममा समीक्षाको क्रममा छ जबकि उसको बजार मूल्य २ मिलियन डलर छ। कुनै उडान उडान फूटबल खेल्न को लागी उनीहरुको केहि बर्षको अनुभव को लागी धन्यवाद छैन।
यो बायो लेख्ने समयमा द्रुत उदाउँदो ताराको शुद्ध मूल्य समीक्षा अन्तर्गत छ।
त्यस्तै, युवा फुटबल प्रतिभा - जसले १ th औं वर्षको जन्मदिन January० जनवरी २०२० मा मनाउने छ - अझ ठूला यात्रीहरूको विलासी जीवनशैली कार र घरहरू लिएर बाँच्न सक्दैनन्। कर्टिस जोन्सका परिवारका सदस्यहरू विशेष गरी उनका आमाबुबाले उनलाई लगातार आधारभूत रहनको लागि धेरै सल्लाह दिएका छन्।
कर्टिस जोन्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्यहरू
हामीले यसलाई कर्टिस जोन्सको बाल्यकाल कहानी र जीवनीमा बेर्ने कल गर्नु अघि, यहाँ मिडफिल्डरको बारेमा कम ज्ञात वा अनकही तथ्यहरू छन्।
सन्दर्भ: जोन्स धर्ममा ठूलो छैन किनकि उनले अन्तर्वार्तामा लेखिएको समयमा वा गोल समारोहको अवसरमा धार्मिक भएको धारणा कतै पाउँदैनन्। यद्यपि, हामी मान्दछौं कि कर्टिस जोन्सका अभिभावकले उनलाई इसाई धर्मको अनुसरण गर्न र पालन गर्न ल्याएका थिए। तसर्थ, असमानताहरू उनको एक इसाई भएको पक्षमा छन्।
TATTOOS: मिडफिल्डरसँग लेख्ने समयमा कुनै ट्याटू हुँदैन। जे होस्, उसले भविष्यमा शरीर कला प्राप्त गर्न सक्छ। त्यतिन्जेल, जोन्स he फिट १ ईन्चको उचाईमा ऊ सिर्जना गरिएको थियो।
यो जीवनी लेख्दा कर्टिस जोन्ससँग आफ्नो पाखुरा वा खुट्टामा ट्याटू थिएन।
धुम्रपान र पिउने: मिडफिल्डर फुटबल ग्रिट्सको संख्या मध्ये एक हो जसले लेख्दा धुम्रपान गर्दैनन् र पिउँदैनन्। कारणहरू, किन जोन्सले यस्तो स्वस्थ बानी छनौट गर्‍यो भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु हो कि शीर्ष-उडान फुटबलको मागहरू सम्हाल्नको लागि उसको शरीर उत्तम आकारमा रहनेछ।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो पढ्नको लागि धन्यबाद कर्टिस जोन्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।
म आफ्नो बुबासँग सबैभन्दा राम्रो साथीहरू थिएँ, जसलाई सरल रूपमा मात्र पास गरिएको छ, र म सबैलाई आफ्नो परिवारमा प्रेम पठाउँछु।